Ungayisebenzisa kanjani i-Debian, Ubuntu, Linux Mint kanye ne-derivatives nge-Stacer | Kusuka kuLinux
Ungayisebenzisa kanjani i-Debian, Ubuntu, Linux Mint kanye ne-derivatives nge-Stacer
Lungiselela, Hlanza futhi ubone ngeso lengqondo ukusebenza nokusetshenziswa kwemishini yethu, kungenye yale misebenzi sonke esiyenza njalo, labo abathanda ukusebenzisa isikhombimsebenzisi sokuqhafaza bese bebeka eceleni ikhonsoli ukwenza lo msebenzi, unezinye izindlela eziningi, enye yazo kuyinto I-Stacer.
Kulesi sihloko uzofunda ukuthi kanjani Ungayisebenzisa kanjani i-Debian, Ubuntu, Linux Mint kanye ne-derivatives, ngokushesha nangokuzibonela, uzophinda ulawule izinhlelo zokusebenza eziqala ngohlelo lwakho lokusebenza, futhi uzokwazi ukukhetha ukuthi yiziphi izinhlelo ofuna ukuqhubeka nokuzifaka.
1 Yini iStacer?
2 Izici ze-Stacer
2.1 Izithombe zesikrini ze-Stacer
2.1.1 Sudo Ngemvume
2.1.3 Isihlanza Sesistimu
2.1.4 Izinhlelo Zokuqalisa
3 Ungayifaka kanjani iStacer?
3.1 Faka iStacer ku-Debian Linux x86 nakokuphuma kukho
3.2 Faka iStacer ku-Debian Linux x64 nakokuphuma kukho
3.3 Khipha iStacer
I-Stacer iyithuluzi lomthombo ovulekile elilula, elenziwa yi- Oguzhan Inan, esivumela ukuthi sibuke izici zemishini yethu, sisebenzise kahle futhi sihlanze ukusatshalaliswa kwethu, sihlele futhi siqinisekise amasevisi nezinhlelo ezisebenzayo, kanye nokuba nekhono lokukhipha amaphakheji esiwakhombisayo.
I-Stacer Ine-interface elula elula, ehlelekile futhi ekhangayo, enconyelwe abasebenzisi abaqalayo nalabo abafuna ukwenza izinqubo esivame ukuzenza kusuka kukhonsoli kusuka kusixhumi esibonakalayo esihle kakhulu.
Ithuluzi lamahhala nelamahhala.
I-interface enembile futhi ekhangayo.
Vumela ukufinyelela kwe-Sudo.
Ine-Dashibhodi ekhombisa ukusetshenziswa kwe-CPU yethu, iMemori, iDiski kanye nemininingwane ejwayelekile yemishini yethu nohlelo lokusebenza.
Kungenzeka ukuskena nokuhlanza amafayela kusuka ku-Apt Caché, Imibiko yokuphahlazeka, izingodo zesistimu, i-App Caché.
Ikuvumela ukuthi ukhethe ukuthi iziphi izinhlelo zokusebenza nezinsizakalo ozozisebenzisa lapho uhlelo lwakho lokusebenza luqala.
Kusinika ukusebenza ukuze kusebenze futhi kungasebenzi amasevisi ngokushesha futhi kalula.
Ifakwe ukukhipha iphakethe ngokuchofoza okukodwa okuhle kakhulu
Izithombe zesikrini ze-Stacer
Ungayifaka kanjani iStacer?
Faka iStacer ku-Debian Linux x86 nakokuphuma kukho
Landa stacer_1.0.0_i386.deb ukusuka Ikhasi lokukhishwa kweStacer. Qinisekisa ukuthi ufake inguqulo yakamuva
Gijima sudo dpkg --install stacer_1.0.0_i386.deb enkombeni lapho ulande khona iphakheji.
Iya kumkhombandlela we-cd/usr/share/stacer/ bese ugijima ./Stacer
Faka iStacer ku-Debian Linux x64 nakokuphuma kukho
Landa stacer_1.0.0_amd64.deb ffrom Ikhasi lokukhishwa kweStacer. Qinisekisa ukuthi ufake inguqulo yakamuva.
Gijima sudo dpkg --install stacer_1.0.0_amd64.deb enkombeni lapho ulande khona iphakheji.
Uma ufuna ukufaka uhlelo kwimenyu yokusabalalisa kwakho, kufanele wakhe ifayela .desktopen /home/$USER/.local/share/applications ukubeka okulandelayo (shintsha umkhombandlela kulokho okuhambisanayo):
Qalisa sudo apt-get --purge remove stacer
I-Stacer Kuyithuluzi elisebenzisekayo, okulula ukulifaka, elinesixhumi esibonakalayo futhi elibandakanya izinto ezimbalwa sonke esifuna ukuzisebenzisa kwesinye isikhathi. Sithemba ukuthi uyithola ilusizo futhi silindele ukuphawula kwakho nokuvelayo kwakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Ungayisebenzisa kanjani i-Debian, Ubuntu, Linux Mint kanye ne-derivatives nge-Stacer
Amazwana ayi-38, shiya okwakho
Ngicabanga ukuthi sikweletwa ukuthi "kanjani." Ngaphandle komhlahlandlela wokufaka / wokukhipha, izithombe-skrini eziningi kepha okuqukethwe okuncane okuphathelene nokuthi yiziphi izinyathelo okufanele uzithathe, njengokuthi yiziphi izinsizakalo ezikhubaza ukucushwa kwefekthri ukuze "isebenzise" uhlelo ngqo.
Ngikushiya izindatshana zebhulogi ezingakusiza ngokuphelele
Ngendlela efanayo uma uya kusixhumanisi esilandelayo https://blog.desdelinux.net/?s=optimizar uzothola imininingwane eminingi ngakho. Ithuluzi likunikeza ithuba lokwenza uchungechunge lwezinyathelo imidwebo
Yukiteru amano kusho
Ngiyabingelela, ngikushiyela iseluleko esincane:
Gwema ukudala okuthunyelwe okunokuqukethwe okungaqondakali nokungasizi ngalutho. Izigidi zokuthunyelwe zalolu hlobo sezivele zikhona, futhi njengoba iLinux iyisizinda sabasebenzisi abaningi beLinux, kunokwaziswa okuningi kuleli khasi okungasetshenziselwa lokhu, kungcono ukuthi uzenze zitholakale ohlwini olusheshayo kunokuba uvuselele isondo.
Phendula u-Yukiteru Amano
Akuvamile ukuthi ukubheke njengokungelona usizo kakhulu, lapho abantu abaningana sebeqalile ukuyisebenzisa ngoba kumane kwenza kube lula futhi kube lula kubo ukuthi babe ne-cli yokwenza izinto ezithile ku-terminal. Ngibonga kakhulu ngeseluleko sakho, yize singalifaki kabusha isondo, sikhulula kuphela amathuluzi akuvumela ukuthi wenze izenzo ezithile ku-Linux.
Izinhlu sezivele zikhona, manje sesengeza futhi senza amathuluzi amasha aziwayo.
Ngimoshe isikhathi sami, akukho lutho olungenziwa ngesandla ngolwazi olumaphakathi
Ngempela kuyinto engenziwa ngesandla kalula, ngikwenza kucace kusingeniso sendatshana
I-Stacer ine-interface elula, ehlelekile futhi ekhangayo, enconyelwe abasebenzisi abaqalayo nalabo abafuna ukwenza izinqubo esivame ukuzenza kusuka kukhonsoli kusuka kusixhumi esibonakalayo esihle kakhulu.
"Ohlakaniphile" ojwayelekile oziqhenya ngokwazi okuningi ngoba imiyalo eminingi ifundwa lapho sinenketho yokwenza konke ngendlela elula. Uyabona ukuthi kwabanye, ikhompyutha kufanele ihlale injalo njengoba yayinjalo kuma-80s.
Siyabonga ngoStacer lokhu, kusebenza kakhulu kithina esingenaso isikhathi sokufunda imiyalo nezindaba futhi sincamela ukusebenzisa isikhathi sethu kwezinye izinto.
Ngiyabonga kakhulu ngokushiya okuvelayo.
Sawubona, ithuluzi elihle kakhulu, ngasendleleni, benza kanjani labo bafana abahlakaniphile abaphendula njengokufuna ukudicilela phansi umsebenzi wakho ngaphandle kokunikela ngalutho nhlobo? Ngithe, ithuluzi elihle nendatshana enhle.
Kujwayelekile, kunezinkulungwane, kepha njengakho konke empilweni, izinto kumele zenziwe kulabo abazazisayo, okunye kufanele sibe nokuthile okubalulekile, abazinika isikhathi sokusigxeka.
KuLinux akukho kulokhu okudingekayo, akudingeki ukuthi ulungiselele noma yini, noma uhlanze noma yini, kungasuki kukhonsoli noma ngesixhumi esibonakalayo sokuqhafaza, iLinux izohlala ihamba njalo.
Okwakho kunesimo esihle, akunakungatshazwa, kodwa ngeshwa ayikho i-OS ekhululekile "esonweni", yize kufanele sazi i-OS yethu esiyithandayo ngempilo enhle anayo nokunakekelwa okuncane akudingayo.
Kunezigaba ezimbili zabantu, labo abazama ngandlela thile ukusiza abanye, nalabo abahlala begxeka abokuqala. Asiwona wonke ama-linux guru. Okwethu esiqala kulo mhlaba, lezi yizindaba esihlala sifuna ukuzizwa, njengoba isiqubulo se-ubutnu sithi, "i-linux yabantu." Imininingwane iyaziswa
Ngiyabonga kakhulu, ngiyethemba ukuthi ngizohlala ngiluhlobo lomuntu osiza abanye 🙂
I-athikili enhle, ngingomunye walabo abakhetha ukungasebenzisi i-console, yize ngibona ukuthi isebenza kanjani, ngithanda isikhombimsebenzisi sokuqhafaza futhi bengingazazi lezi zinsiza.
Ukusebenziseka okusinikezwa yikhonsoli kubaluleke kakhulu, kepha akukho muntu okuyimfihlo ukuthi kunenani elikhulu labasebenzisi abathanda ukwenza izinto ngokugqamile nangendlela elula, lelo qembu labantu limele amaSystem amaningi Abasebenzisi beDeskithophu futhi kufanele sikufinyelele kangcono.
Phinda Kulula kusho
I-athikili enhle. Ithuluzi lokwenza kahle lihle kakhulu. Ngizoyihlola kwiLinux Mint yami.
Phendula Ukubuyisa Okulula
Ngikuhlolile ku-Linux MInt
Ngibona ukufana kwe-ubuntu tweak noma i-bleachbit.
Yebo, mhlawumbe ukusebenza kuyafana kwezinye izimo ... Ngithanda isikhombimsebenzisi esihle sikaStacer
Ngiyazithokozela lezi zinhlelo ze-GUI nalabo abaziletha kithi. Futhi ngiya phezulu kwekhanda labasindayo be-consolita abakhathazekile ngokuthi kukhishwa izinhlelo ezine-GUI. Hheyi, uma ungazithandi, ungazisebenzisi uyeke ukuzihlupha.
Ngiyabonga kakhulu ngamazwana akho, i-LInux ingeyakho konke ukuthanda nemibala.
Hhayi-ke, ake sibheke ukuthi labo ababhula umlilo be-anti-GUI bathola nini futhi basishiya sodwa "nokunambitheka nemibala" yethu. Baziphatha sengathi othile ubaphoqe ukuba bazigqoke!
Ntambama, ngizamile ukuyifaka ku-Ubuntu 16.04 kepha ngokusobala ayisebenzi, ngiyenzile ngivela kukhonsoli nakwisikhungo sesoftware, kepha ayisebenzi:
Ilungiselela ukukhipha i-stacer_1.0.0_amd64.deb…
Ithula isitaki (1.0.0-1) ngaphezulu (1.0.0-1) ...
Ukusetha i-stacer (1.0.0-1) ...
Icubungula izimbangela ze-bamfdaemon (0.5.3 ~ bzr0 + 16.04.20160824-0ubuntu1) ...
Ukwakha kabusha / usr/share/applications/bamf-2.index…
Icubungula izimbangela zamamenyu we-gnome (3.13.3-6ubuntu3.1) ...
Icubungula izingcipho ze-desktop-file-utils (0.22-1ubuntu5) ...
Icubungula izimbangela zokuxhaswa kwe-mime (3.59ubuntu1) ...
stacer: i-oda alitholakalanga
Iya ku-cd / usr / share / stacer / isiqondisi bese usebenza ./Stacer ... Noma vele uthayiphe okulandelayo kusuka ku-terminal /usr/share/stacer/./Stacer
Endabeni yami ifolda engu- / usr / share / stacer ayiveli, ngabuye ngayifuna ngesandla nge-nemo futhi lutho.
Sawubona @ HO2Gi, ungangitshela ukuthi yikuphi ukusatshalaliswa nohlobo olufakayo ukubona ukuthi ngingasilingisa yini lesi simo.
Luigys: Siyabonga ngokuletha ukukhanya kancane ekusebenziseni izinhlelo zethu zokusebenza.
Manje sengikhumbula umusho ovela kumPhostoli wethu, uJosé Martí, othi:
«ILanga, inkosi yethu yenkanyezi, inamabala. Ayiphelele. Ababongayo bayakubona ukukhanya. Abangabongi babona kuphela amabala.
Futhi bheka ukuthi kunzima kanjani ukubona amabala elangeni uma ubheka ngaphambili!
Isisho kahle kanjani ibinzana:
"Izinja zikhonkothe ​​umngani kaSancho, kuwuphawu lokuthi siyadlula."
Ozithobayo. Ngiyilandile kepha ngiyifakile ngesifaki esiza amaphakheji we-DEB, konke kuhle, kepha ngifuna ukuyiqhuba futhi ngithola iphutha
Ngikushiya isithombe, ngiyalwazisa usizo kusengaphambili
Yisebenzise kusuka kukhonsoli ngendlela elandelayo bese ungitshela ukuthi kuhamba kanjani:
Kufanele kube kukhona okungahambi kahle ngesinqamuleli. Ungazama ukudala okusha kusuka kusihleli sakho sombhalo esivele sikhona. Uma ufuna ukukwenza, nayi ikhodi:
Igama = Stacer
I-Exec = / usr / share / stacer /./ Stacer
Isithonjana = stacer
Isiphetho = amanga
Thayipha = Isicelo
Enkambeni ye- "Icon" ungakhombisa indlela eya kunoma yisiphi esinye isithonjana osithandayo (isibonelo /home/jesus/cepillo.png).
Enye into: Ngikhohliwe ukuthi kufanele ulondoloze ifayili ngesandiso se-.desktop uma usuqedile ukulihlela.
Siyabonga ngolwazi, noma yiluphi usizo lwabasebenzisi abayisisekelo luyaziswa kakhulu, imikhonzo
Kuyangitshela ukuthi kunokuncika okungenakugcwaliseka ngakho-ke bengisethelwe ukuyikhipha kepha oh oh ngiwutholile ngawuvula futhi ungasetshenziswa ... angazi noma umyalezo ubujwayelekile noma yini. Ngisebenzisa iXubuntu 16.04.
Ukubingelela nokubonga ngokuba nomusa kulabo bethu abasha ku-GNU / Linux ukwenza impilo ibe lula kithina (ngoba ngiyakungabaza impela ukuchitha isikhathi esiningi ku-GNU / Linux ukuze ngibe nguchwepheshe kuyo). Ngokweqiniso ngithola ukuthi abasebenzisi beLinux banelukuluku lokuthi iWindows iphethe imakethe ye-pc, kepha isimo sengqondo sabagxeki bakho ukungavumeli noma ngubani ukuthi angene ... lokho akuhambisani.
UJosé Luis kusho
Sawubona! Inohlonze impela!
Ngingathanda ukwazi ukuthi ngabe lolu hlelo lokusebenza lusebenzela i-Ubuntu kuphela nezisetshenziswa noma okunye ukwabiwa.
Phendula uJosé Luis
I-CentOS kumanethiwekhi ekhompyutha ama-SME